Nyocha UHANS Max 2: ihuenyo 6,44 ”na igwefoto 4 maka naanị € 130 | Androidsis
Nyocha UHANS Max 2: 6,44 ″ ihuenyo na igwefoto 4
Ihe ogo ndị nrụpụta China na -aga n'ihu na -aka mma kwa ụbọchị bụ ihe onye ọ bụla na -ekwurịghị ọzọ. Oge ndị gara aga mgbe ekwentị China adịghị mma nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ndị nrụpụta ndị ọzọ; ugbu a kwa ụbọchị, ha na -eme ka ọnụ ọnụ mara mma maka ụdị ndị na -azụ ahịa. Na nke ahụ bụ ikpe nke UHANS Max 2, ọnụ ụgbọ ala emebere maka ndị chọrọ ịnwe nnukwu ngwaọrụ na ọnụ ala dị ala. Maka naanị € 130 na Gearbest ị nwere ike ịnwe ọdụ nwere ọmarịcha 6,44 anụ ọhịa ahụ. Ị chọrọ ịhụ nkọwa ndị ọzọ gbasara ama ama a? Ọ dị mma, echefula nyocha anyị niile.
1 UHANS Max 2 okirikiri nhọrọ ukwuu na ngosi
2 Igwefoto 4
3 Njirimara teknụzụ nke UHANS Max 2
4 Ọnụahịa na ebe ịzụta UHANS Max 2
7 Osisi foto UHANS Max 2
UHANS Max 2 okirikiri nhọrọ ukwuu na ngosi
Uhans Mx 2 na iPhone X ọhụrụ
Imewe na n'elu ya niile 6,44 anụ ọhịa ahụ bụ ihe ndị a na -ahụ anya na nke kacha akara Max 2. Ihuenyo bụ panel IPS nwere mkpebi HD zuru oke nke pikselụ 1920 x 1080 nke na -ejikọ ya na chassis aluminom 176.5 x 89.2 x 9.2 mm nke na -eme ka setịpụ ikpeazụ jiri anya. kpachapụrụ anya na imewe ọkachamara Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụkwa ihe ọdịnala na ọ naghị etinye ihe ọhụrụ ọ bụla n'ihe metụtara ọdụ ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta n'ahịa. Imetụ aka dịkwa mma yana ịdị mma nke ihe ndị ahụ dị mma, yabụ anyị na -ahụ ọdụ ụgbọ mmiri nke na -ele anya karịa ihe ọ na -efu. Dị ka ebe na -adịghị mma, ọdụ ụgbọ na -adị mfe nke ukwuu yabụ ị ga -akpachara anya na ya.
N'agbanyeghị nnukwu akụkụ nke ngwaọrụ a, ịdị arọ ya bụ naanị gram 245 nke dị mma maka njedebe nke njirimara ndị a.
Akụkụ nke ike nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ bụ maka igwefoto. Max 2 na -abịa igwe onyonyo abụọ n'ihu na azụ. Igwefoto n'azụ nwere okpukpu abụọ bụ 13 + 2 megapixels nwere flash ugboro abụọ ebe igwefoto n'ihu na -enyekwa anyị 13 + 2 MP nwere ọkụ ọkụ LED nke na -abịa aka maka ịse foto n'ọnọdụ ọkụ dị ala.
N'ihi ọnụnọ nke igwefoto abụọ, akara mkpisiaka Ọ dị na bọtịnụ ụlọ. Onwe m, ọ bụ ebe kacha dịrị m mma iji ya, mana nke ahụ masịrị onye ọ bụla.
Njirimara teknụzụ nke UHANS Max 2
Ọ bụghị naanị na anya UHANS Max 2 dị elu karịa ihe anyị nwere ike ịtụ anya maka ụdị ụdị a, na ọkwa ike a na -enyekwa ya nke ọma maka MTK6750T processor 1,5 GHz na 4 GB nke RAM na 64 GB nke ROM. Ihe ndị a niile yana sistemụ arụmọrụ gam akporo 7.0 nougat na -eme ka Max 2 na -agba ngwa dị arọ nke ọma.
Batrị bụ 4.300 mAh nke mara ezigbo mma. Nsogbu bụ na n'ihi nnukwu ihuenyo ya, oriri na -abawanyekwa oge bụ naanị 10 awa site n'iji oke ọkụ na ụbọchị iri na ọnọdụ kwụ ọtọ.
Enwere ike ịhụ njirimara teknụzụ ndị ọzọ na tebụl nchịkọta ndị a:
Ihuenyo IPS nwere ikike 6 44 sentimita asatọ na mkpebi 1920 x 1080 »
Nhazi «64bit MTK6750T 1 5 GHz Isi Octa »
Ebe nchekwa RAM 4GB
Nchekwa ROM 64GB
SD oghere "Ee microSD ruo 256GB »
Usoro njikwa "Gam akporo 7.0"
Isi ụlọ "Ugboro abụọ nwere mkpebi 13 MP + 2 MP"
Secondary igwefoto "Ugboro abụọ nwere mkpebi 13 MP + 2 MP"
Batrị 4.300 mAh
Ngwa ngwa ngwa Si
Ọdụ ụgbọ mmiri Micro USB
Igweisi "Ee (obere jaket 3 5mm) "
Njikọ "Wi -Fi Ee 802.11 b / g / n »
Radio n'agbanyeghị na ịchọrọ isi okwu
Akụkụ "17.65 x 8.92 x 0.92 cm"
Ibu ibu 245 grams
Agba "Black na ọlaedo"
Red Teknụzụ/ìgwè 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz - 3G: WCDMA 900/2100MHz - 4G: LTE FDD -800/900/1800/2100/2600MHz »
Ahịa 132 €
Ọnụahịa na ebe ịzụta UHANS Max 2
Ọnụahịa UHANS Max 2 dị € 132. Na ọkwa nke uru ego, anyị na -eche ihu ọnụ nke na -enye anyị ihe karịrị ihe ọ na -efu maka ya ọ bụ ịzụrụ ihe doro anya maka ndị niile na -achọ nnukwu ọdụ ụgbọ ala nwere arụmọrụ ọkara yana ọnụ ahịa dị oke ọnụ.
6,44 inch ihuenyo
Grates dị mfe
Osisi foto UHANS Max 2
Pịa na foto ọ bụla ka ịhụ nkọwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyocha UHANS Max 2: 6,44 ″ ihuenyo na igwefoto 4
Nubia Z17S rutere na Spain
BlackBerry KEYone kwadoro na Spain